Hapana kunetseka! Semalt Expert Anoziva Nzira Yokugadzirisa Mafiriji MuGoogle Analytics
Google Analytics inotarisira kuunganidza mashoko uye data pamusoro pekushanyira kwose kunoitwa panzvimbo. Kuti uwane kunzwisisa zvakajeka kwewebsite yako yebasa, mumwe angada kutarisa data kubva kuGoogle Analytics yakabudiswa nhepfenyuro. Inobatsira kusika zvisarudzo zvekuvandudza kana kuchinja zvimwe zvikamu zvekushanda kwekugadzirisa.
Imwe yenzira iyo vadzidzisi vepanzvimbo vanogona kuona dhepfenyuro pamusoro pezvinhu zvakasiyana nezvevashanyi vavo ndeyokusvibisa.
Oliver King, mumwe wevanyori vane ruzivo rwakawanda kubva kune Semalt , anotsanangura kuti ungashandisa sei Google Analytics filter kuti abvise vheji dzomukati kubva kumicheto ye site.
Usati wasarudza kugadzira Google Analytic filtration kuti usabvisa kambani yekambani kubva mumishumo, zvinokosha kuti unzwisise chikonzero chekuita saizvozvo. Google Analytics inorondedzera chero kushanyira panzvimbo yacho, kunyange iyo inobva mukati mekambani. Pakati pekutsvaga kwekubudisa webhusaiti, vatengesi vanogona kuzviwana ivo vachipedza nguva yakawanda panzvimbo ino. Vanogona kunge vari kutsvaga zvinyorwa zvakakodzera kuti vagovana nevatengi vavo, kana kuongorora zvinyorwa zvayo.
Zvinosuruvarisa kuti izvi zvinangwa zvakanaka zvinogona kuva nemigumisiro yakaipa. Apo Google Analytics inorondedzera kushanyira uku, inokanganisa ruzivo rwandinovimba naro kuti tione kuti vanhu vakawana sei paiti uye zvavakaita pataivepo. Mukati mharaunda ingaratidzawo zvinyorwa zvenhema izvo zvinoita kuti vanhu vasaedza kunzwisisa "tsika" dzevashanyi..Chigumisiro ndechekuti inoshandura mitero yewebsite kuburikidza nekupa nhepfenyuro dzakakanganiswa. Zvisinei, pane nzira inopoteredza dambudziko iri nekubatsirwa kweva filters yeGoogle Analytics sezvo ichichenesa basa rewebhu redu kubva mumishumo.
Vhura Google Analytics uye upinde mubhuku rako.
Enda kune chikamu cheChirongwa uye tanga maonero matsva. Iva nechokwadi chekusiya imwe yei isina kufananidzwa ne data yakasvibiswa. Iyo inoshanda seyo kuchengetedza. Gadzira imwe itsva yekero ye IP yakasvibiswa. Buda neine zita rinotsanangura zvemaonero matsva uye iva nechokwadi chokuti une nguva yakakodzera yenguva.
Mutsva mutsva, sarudza tab ne "Ita Firiji."
Wedzera firiji waunoda kushandisa. Kana bhatani risingaoneki padanho rino, iwe unogona kubvunza zvikodzero zvakakwirira kubva pa webmaster.
Ipa iyo firiji itsva zita uye sarudza rudzi rwaunoda. Muchiitiko ichi, sarudza Kuchengeta mutemo kubva paIndaneti inenge yakaenzana.
Zvadaro, shandisa IP address yewebsite yako. Izvo "chii chinonzi IP kero" iyo ndiyo imwe yenzira dzakanakisisa dzaungagona kuwana panzvimbo ino yeIndaneti.
Chero chero iyo IP inoshandiswa nechombo chacho, kopi uye iisunge mumatafura eGoogle Analytics.
Chengetedza firiji itsva.
Mushure mokunge wapedzisa, mutengesi wose kubva kune imwe iyo kero ye IP haisi kuzoonekwa mumashoko eGoogle Analytics. Kana iwe ukaita basa rakawanda kubva kune imwe mamwe maIndaneti, zvingava kuchenjera kuumba mafaira matsva kwavari zvakare. Izvo zvinoenda kune vashandi vechitatu vanoita basa rakawanda panzvimbo yenyu Source .